IDRA-21 ntụ ntụ usoro, ọkara ndụ, Uru, ọghọm ya, na Ntụle
Gini bu IDRA-21 ntụ ntụ?
Ọ bụ mmadụ kpamkpam ịnọ na nche maka ihe nwere ike inye gị njedebe. Iji meziwanye ọrụ mmadụ, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-atụgharị ugbu a na ọgwụ ndị nwere ọgụgụ isi, nke a maara nke ọma dị ka nootropics. O nwere ike ịbụ na ị hụla ọtụtụ ihe mgbakwunye na-ekwu na ọ na-eme ka ọrụ ọgụgụ isi mmadụ pụta mana ị kwụsịrị ịjụ onwe gị onye na-arụ ọrụ? IDRA-21 bụ ọgwụ nke ewepụtara site na usoro benzothiadiazine. E nwere azịza na IDRA-21 metụtara Aniracetam, nootropic ọzọ dị okpukpu iri atọ karịa IDRA-21. Ga-achọpụta na IDRA-21 bụ nootropic nke na-aga n'okwu ahụ. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma nootropics nke na-eme mkpọtụ ma a bịa n'ịkwalite ncheta gị, mkpali, usoro echiche, na ịkwalite nrụpụta gị. Ọ dị ọhụrụ na ahịa, nyocha ka na-aga n'ihu ịmatakwu banyere 22503-72-6 mmetụta na ebe nchekwa, ikike nghọta, na ntụgharị nke ụkọ ihe ọmụma.
Kedu ka IDRA-21 si arụ ọrụ?
Dịka ọgwụ ampakine, IDRA-21 na-arụ ọrụ site na ngbanwe ngwungwu dị mma nke ndị na-anabata glutamate AMPA na ụbụrụ. Ebe ọ bụ na ndị na-anabata AMPA na-ebute nnyefe synaptik ngwa ngwa, enwere mmụba na ume synaptic excitatory. A makwaara ya dị ka allosteric ebighị.
Usoro ọgwụgwọ / iji Ntụziaka IDRA-21 na-atụ aro ya
N’agbanyeghi na anwalere IDRA-21 n’anu anumanu, otutu ndi mmadu ji ya, ndi ozo ka dikwa n’elu ya. N'ịbụ onye nootropic na-ewu ewu, ọtụtụ ndị ekwuola banyere usoro ọgwụ kachasị mma nke na-enye nsonaazụ kachasị. Ọtụtụ isi mmalite na-atụ aro na IDRA-21 usoro onunu ogwu kwesiri iru 10mg n'ime awa 48. Nwere ike were ya tupu nri ma ọ bụ nri kemgbe ọ bụ mmiri mmiri na - achọ naanị iko mmiri iji rie ya. Ọ bụrụ na ọ bụ nzukọ mbụ gị na ọgwụ a nootropic, ọ ga-adị mma ka ị bido na usoro ọgwụ dị ntakịrị IDRA-21. Inwere ike iwelie ya nke nta nke nta mgbe ị ji n’aka na ahụ gị anaghị emeghachi omume na-adịghị mma maka ojiji ya. IDRA-21 nchịkọta nootropic Ewezuga eziokwu ahụ ị nwere ike iji IDRA-21 n'onwe ya, ị nwere ike ịhọrọ ijikọta ya na nootropics ndị ọzọ ma ọ bụ mgbakwunye iji nweta uru elele karịa. N'ihi na enwere ike ịnwe oke na enweghị oke nyocha, ị ga-aga nwayọ na ya. Anyị agaghị akwado ịkwado IDRA-21 na ọgwụ ọ bụla ọzọ dị ka Aniracetam. E kwesịkwara izere ndị ọzọ nootropics nke na-eme ka ọkwa glutamate dị.
Kedu uru IDRA-21 dị?
Onye ọ bụla na-akpali akpali abawanyela arụpụta ihe. Were, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịnwere ike iji rụọ ọrụ gị nke ọma kwa ụbọchị, o yikarịrị ka ị ga-emezu ebumnuche gị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị mkpali iji rụọ ọrụ ọ bụla, ị na-emebi atụmanya uto gị. Otu n'ime Uru IDRA-21 bụ na ọ na-eduga na nkwalite ka mma na, n'aka nke ya, na-akwalite arụmọrụ ma na-akwalite arụpụtaghị ihe. N'ihi ya, ị nwere ike nweta ebumnuche gị na ebumnuche gị n’echeghị na ị na-etinye onwe gị nnukwu ike.
Dịkwuo arụmọrụ ọrụ
Anyị niile maara na nsonaazụ zuru oke chọrọ ihe karịrị naanị mbọ. Ihe nke a putara bu na inwere ike itinye ihe gi niile ma ghota na odighi enweta nha anya nha nke ichoro imezu. Ihe oma bu IDRA-21 ntụ ntụ na-emesi gị obi ike na itinye uche na nlebara anya ịchọrọ iji mezuo nsonaazụ ịchọrọ. Ejikọtara ya na ịrụsi ọrụ ike, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta akara ngosi kachasị elu.
Na-abawanye na obere oge na ebe nchekwa
Ka ị na-eto, ị ga-achọpụta na obere oge ncheta gị adịghịzi nkọ ka ọ dị na mbụ. Begin bido ichefu ihe pụtakarịsịrị ihe, yana ịgọnahụ nke a, ide ndetu ma ọ bụ ihe ndetu na-abụ enyi gị. Ọ bụ ezie na ị nwere ike inwe nsogbu na ncheta obere oge gị nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe ọzọ, ụjọ ekwesịghị. Nke a bụ n'ihi na ị nwere ike iwelite obere oge ncheta gị oge ọ bụla ịchọrọ. Ojiji nke 22503-72-6 bụ otu n’ime ụzọ dị mma ị ga - esi rụọ ya merie nsogbu nwa obere oge na-echefue. Ka a sịkwa ihe mere eji ya eji agwọ ọrịa amnesia. Site n'iji ya, ị nwere ike icheta ihe ịchọrọ.
Nwere ụfọdụ ọgwụgwọ ọgwụgwọ na ịda mba
Na-enwe nkụda mmụọ, na-echegbu onwe gị mgbe niile, ma ọ bụ na-enwe nrụgide? Agụụ agụụ ị belata? Ọ na-esiri gị ike ihi ụra? Ọ bụrụ na azịza gị bụ ee, mgbe ahụ ị nwere ike ịda mbà n'obi. Dịka ịmara, ịda mbà n'obi nwere ike imetụta ndụ gị n'ụzọ na-adịghị mma, na-eme ka ị ghara iru ike gị. Na ihu ọma, ọ naghị esiri ike iji merie ya site na iji IDRA-21. Site n’inye ụbụrụ gị nkwalite, ọ nwere ike inyere gị aka ịlụso nkụda mmụọ ọgụ. Ọzọkwa, ọ nwere ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọ ga - eme ka ahụ dị gị mma oge ọ bụla ọ dị gị ka nchegbu na - achọ ịbanye.
Ikike ị atta ntị nke ọma maka ogologo oge enweghị nsogbu bụ nke kachasị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ n'ịghọta na oge ị na-etinye uche gị na-aga n'ihu, ị nwere ike iji IDRA-21. Site na nyocha IDRA-21 na ntanetị, enwere nkwupụta na ọ na - enyere gị aka ịnọ n'ọrụ ma nye ya nlebara anya kwesiri. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na - enyere gị aka itinye uche n'ihe ọbụlagodi na ihe ndọpụ uche niile na mpụga.
Mmụba na nghọta mmadụ
Enwere ike ịkọwa nghọta oghere dị ka ụzọ nke isii mmadụ niile kwesịrị inwe. Ọ bụ ikike ịghọta ihe na ịghọta ụwa gbara gị gburugburu n'ụzọ ka mma. IDRA-21 na -ekwu gi ihe a n’eme ka gi mara ihe n’eme ka gi puta ihe.
Na-enyere aka n'ịgwọ ọtụtụ ọnọdụ akwara ozi
Taa, ojiji nke IDRA-21 abanyela na ọgwụgwọ na nlekọta nke ndị ọrịa na-ata ahụhụ site n'ọtụtụ ọnọdụ akwara dịka usoro ịka nká, mmetọ na-arịwanye elu, ọrịa Alzheimer, na ọrịa Parkinson.
Anyị enweghị ike ịmata ihe. Dika otutu mmadu siri chee na ihe ndi mmadu n’etughari ha, enwere uzo i gha enweta otutu ihe omuma. IDRA-21 bu otu n’ime ihe eji eme ka ihe nile mara ihe n’ebuputa mmadu.
Mmetụta dị n'akụkụ IDRA-21
Ọtụtụ mmadụ na-ekwu okwu banyere ọgwụ a n'ihi na ọ nweghị nsonaazụ ọ bụla. Site na iji usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro ya, o yikarịrị ka ị gaghị enwe mmerụ ahụ ọ bụla IDRA-21. Agbanyeghị, ụfọdụ nwere ike ịnwe nsonaazụ ndị metụtara ojiji nke nootropics ma ọ bụ ampakines. .Dị IDRA-21 akụkụ mmetụta gụnyere;
Mmụba na neurotransmission glutamate na-ebutekarị akụkụ ndị a IDRA-21. Nke kachasị, nke a na-eme ndị ọrụ AMPA ha dị oke egwu ma ha adịghị mkpa iji IDRA-21. Nsonaazụ ndị ọzọ ekwesịghị ịfụ gị ụjọ; ọgwụ ahụ nwere ike ịba uru dị ukwuu, uru ya karịrị ihe ndị ọzọ ọ na-akpata. O yikarịrị ka ị ga-ata ahụhụ site na nke ọ bụla n'ime ha, Ọ bụrụ na ọrịa strok jidere gị n'oge na-adịbeghị anya, ị ga-ezere iji ọgwụ a n'ihi na ọ nwere ike ime ka ọnọdụ gị ka njọ.
Mmụta / nyocha na IDRA-21
N'ime ihe omumu ndi gara aga emere na IDRA-21 ike na otu o si eme na AMPA. A nwalere IDRA-21 na oke nyocha ụlọ nyocha gafere ọka mmiri. Achọpụtara na oke na-elekọta ya IDRA-21 rụrụ ọrụ dị mma karịa ka e jiri ya tụnyere ndị nke emeghị. Ha gosiputara nke a site na mbu iburu uzo mawa. Ejikwa nsonaazụ nke IDRA-21 na huperzine na ebe nchekwa nkwuputa visual na macaarad na-eto eto iji nwale arụmọrụ ya.
Nyocha ntụ ntụ IDRA-21
Na-abawanye itinye uche n'ihe na itinye uche Edwin R. na-ekwu, sị, “nootropic a na - emetụta ihe ndị ọzọ niile na - etinye otu uche. Enwere m ike ịgba akaebe na nke a n'ihi na kemgbe m malitere ịnara ya, ahụla m nnukwu ọdịiche na ụzọ m si amụ ihe na ọrụ. Ana m amụ ihe nke ukwuu mgbe arụchara ọrụ, na n'oge gara aga, enweghị m ike itinye ma nlebara anya zuru oke. M na-emezughị n'otu, mana nke a abụghị ikpe n'oge a. Onye isi m gwara m na abụrụ m onye na-arụsi ọrụ ike ebe onye nkuzi m kwuru na abụzi m nwa akwụkwọ na-etinyekarị uche. Ahụrụ m eziokwu ahụ n'anya na ịnara IDRA-21 dị m ezigbo mma ebe ọ bụ na m na-eji iko mmiri eji ya n'oge ọ bụla n'ụbọchị. IDRA-21 bụ ihe m na-achọ. ” Nyeere m aka ịda mbà n'obi Essy J. na-ekwu, “N’oge na-adịbeghị anya, enwere m nkụda mmụọ dị nro n’ihi ọrụ m na-akpata nchekasị, nwa ọhụrụ na ndụ m dum na-emetụta m. Agbalịrị m ọgwụ ole na ole, mana ọ dịghị nke yiri ka ọ dị mma. Ọ dabara nke ọma, otu enyi m tụrụ aro ka m mee zụta ihe ntụ ọka IDRA-21 iji gbalịa ịlụso ịda mba na nkụda mmụọ ọgụ. Ọ dị mma, ọ dịla naanị atọ n'ime ọgwụ a, ma ọ kpatara oke mmetụta. Enwere m ike iche echiche ogologo ụbọchị niile na-enweghị nhụjuanya site na mgbanwe mmụọ. M ga-aja ya mma na onye ọ bụla chere na ha anwụọla. ” O nyeere nwa m nwanyị aka ịnagide ichefu William S. na-ekwu, “Nwa m nwanyị nwere ọrịa ADHD siri ike ma na-etinye uche ọbụna na sekọnd ise bụ nnukwu ọrụ. Otú ọ dị, ntụ ọka IDRA-21 anọwo na-azọpụta ndụ ebe ọ bụ na uche ya adịwanye mma nke ukwuu. Ọ na-echetakwa ọtụtụ ihe karịa ka ọ na-emebu, n'ihi ngwaahịa a. Achọpụtala m na ọ nweghị mmetụta ọ bụla na ya, nke a na-emekwa ka ọ akara akara karịa. Daalụ IDRA-21, nwa m nwere ike ibi ezigbo ndụ ugbu a. ”
Ebee ka ịzụta IDRA-21 ntụ ntụ?
Dị ka a hụrụ n'isiokwu ahụ, IDRA-21 nwere ike inye ndụ gị mgbanwe zuru oke. Ewezuga ime ka ị nwekwuo ọrụ ma mụrụ anya, IDRA-21 nwere ike ịme ka ị nwee ndụ obi ụtọ. Amaara m na ị nwere ike ịnọ na-eche ugbu a ebe ị nwere ike isi nweta ya. Otu n'ime nsogbu ndị kachasị emetụta ndị mmadụ bụ ịnweta isi iyi IDRA-21 a pụrụ ịdabere na ya. Nke ahụ bụ n'ihi na ngwaahịa a agbanweela ka ọ bụrụ obere mkpuru na-eche na ọ ka nọ n'ọmụmụ ihe ọmụmụ ya. Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na ị gaghị etinye aka gị na IDRA-21 dị mma. Nwere ike mgbe niile zụta IDRA-21 online ma nyefee ya ọnọdụ gị. Nke a ọ́ dịghị echekwata gị isi ọwụwa nke isi n'ụlọ ahịa wezuga ahịa na-arịọ maka ya? Nye anyị iwu taa ma bido njem gị iji nwee nkwalite na nkwalite arụmọrụ ka ukwuu.
Cognitive Enhancing Drugs, nke Jerry J. Buccafusco depụtara, peeji nke 92-93
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, LLC Akwụkwọ, General Akwụkwọ LLC, 2010, peeji nke 1-36
Ahụike & Ọgwụ: Ọrịa, Nchịkọta & Ọgwụ, Site n'aka Nicolae Sfetcu
1.Gịnị bụ ntụ ntụ IDRA-21?
2.Kedụ ka IDRA-21 si arụ ọrụ?
3. Ntụziaka akwadoro / Iji Ntụziaka nke IDRA-21
4.Kedu uru nke IDRA-21?
5. Akụkụ Mmetụta nke IDRA-21
6.Sudiudi / Nnyocha na IDRA-21
7.IDRA-21 ntụ ntụ Nyocha
8.Ebe iji zụta ntụ ntụ IDRA-21?
Oleoylethanolamide (OEA): Ọgwụ Mgbu Na-akpata Nke Na-enyere Gị Aka ịchịkwa Agụụ
Palmitoylethanolamide (PEA) Nwere Uru Weight Weight?
Nke kacha mma Dehydroepiandrosterone (DHEA)